I-UNWTO iyichaza njani nayiphi na imfuno yeZizwe eziManyeneyo kunyulo olunobulungisa?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » I-UNWTO iyichaza njani nayiphi na imfuno yeZizwe eziManyeneyo kunyulo olunobulungisa?
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziPhukileyo zaseGeorgia • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • iindaba • abantu • Cinezela iZaziso • ISpain Iindaba Eziphambili • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Septemba 13, 2020
10 imiz efundwayo
Ulibale i-COVID-19. Amalungu eBhunga leSigqeba le-UNWTO asendleleni eya eTbilisi, eGeorgia ukuba babe yinxalenye yobuqhetseba bamva kwaye bayacelwa ukuba bancedise ekusetyenzisweni konyulo oluzayo lukaNobhala Jikelele.
Njengokuba uluntu lwamanye amazwe lujonge ngenkxalabo enkulu kwizinto ezenzeka e-Belarus kulandela unyulo lukamongameli lwakutsha nje, uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili, uthatha amanyathelo afanayo ekuqhubeni inkqubo yonyulo yombutho wakhe ukuze anyuse imigoqo yonyulo kwakhona. kwikota yesibini.
Ukufuna uNobhala-Jikelele omtsha yayilinqaku papashwa ngu eTurboNews kwangoko yiveki. Eli nqaku lichaze umzamo kaNobhala-Jikelele we-UNWTO wokuhambisa umhla wonyulo ukusukela ngoMeyi 2021 ukuya kuJanuwari 2021 kunye nomhla obekiweyo wokubeka abagqatswa ngoNovemba 2020. Ngokutsho kwemithombo ye-eTN, eli nqaku libangele inkxalabo enkulu malunga noNobhala we-UNWTO wangoku. -General Zurab Pololikashvili uzama ukusebenzisa iinkqubo zokuphelisa ukhuphiswano kunyulo oluzayo.
Inzame zamva nje zokuzisa umhla wonyulo lukaNobhala-Jikelele ibonakala ingomnye umzekelo olusizi wendlela uPololikashvili azama ngayo ukulawula i-UNWTO ngezibonelelo zakhe kunye nezibonelelo zabahlobo abambalwa abasondeleyo. Kwimigaqo kunye neenkqubo ze-UNWTO Executive Council, icacisiwe gca ukuba amaxwebhu kufuneka athunyelwe kwinyanga enye phambi kokuvulwa kweseshoni yeBhunga.
Ngaphantsi kweenkokheli zangaphambili ze-UNWTO, lo mhla wokugqibela wawusoloko uhlangatyezwa ngokulula. Nangona kunjalo, phantsi kwePololikashvili kwizihlandlo ezahlukeneyo, amaxwebhu afanelekileyo ayenziwa ukuba afumaneke okwexeshana. Oku kunxulumene nengxelo efunyenwe ngabathunywa belizwe.
Into esandula ukwenzeka iyothusa ngokuka mthombo. Ukumangaliswa kwamazwe amaninzi angamaLungu e-UNWTO, eTurboNews ifunyenwe nge-11 Septemba, ngaphantsi kweveki enye phambi kokuvulwa kweseshoni ezayo ye-UNWTO yeBhunga eliPhezulu kamva kule veki, ukuba uxwebhu lwenkqubo yonyulo lutshintshiwe ngenjongo yokuzisa umhla wonyulo kuJanuwari 2021.
Kubonakala kungenakwenzeka ukuhambisa unyulo kuJanuwari kuba umba wobalo ubaluleke kakhulu. Iincwadi zonyaka-mali ka-2020 azizukulunga kude kube nguMeyi 2021. Kufuneka zivunywe phambi kwentlanganiso yebhunga yesi-2 yonyaka, naphambi kweNdibano yeZizwe eziManyeneyo. Ke ngoko akukho ngqiqweni ukwahlula ukwamkelwa kohlahlo-lwabiwo mali kunyulo kwaye ucofe intlanganiso kaJanuwari 2021 kuphela ngenjongo yokonyula unobhala-jikelele omtsha kwangethuba.
Ibonisa ngokucacileyo intlanganiso yonyulo ka-Januwari ecetywayo kunye nomhla obekiweyo wokubhalisa abagqatswa ngo-Novemba 2020 yenzelwe kuphela ukuba nefuthe kunyulo lukaNobhala-Jikelele kwaye ibambe wonke umntu ngequbuliso nangexesha apho kushiyeke kakhulu ukuxoxa.
Abaphathiswa abathathu bezokhenketho babanjwa bothukile kwaye bakuqinisekisa oku eTurboNews.
Umphathiswa, okwalilungu lebhunga elilawulayo uxelele eTurboNews: "Yhuuu inzima lento, ndizakufowunela uSG ndifumanise." Omnye umphathiswa uxelele eTurboNews: “Ndilufundile olu xwebhu kwaye kuyamangalisa ukuhambisa unyulo kuJanuwari. Kokokuqala ukuba kwenzeke. Injongo yayo icacile. ”
Umphathiswa wesithathu wawubona lo myalezo waza wathi: “Enkosi,”
Umphembeleli ophezulu wehlabathi kunye nentatheli evela eLondon uxelele eTurboNews ngaphandle kwerekhodi: I-UNWTO Ukukhukuliseka uye ngokungahambelani. Inkqubo ye- WTTC Wenza umsebenzi ongcono kakhulu. UGloria ucatshulwe ngokubanzi. I-UNWTO yinkcitho yendawo kunye nexesha. Eyona ngxaki inkulu kwezakha zabakho kwezokhenketho nayo yonke into eyenziwayo nguZurab kukuhamba ngenqanawa kunye ne-Saudis okanye ukutyelela i-Itali. Indoda nombutho azibalulekanga. ”
Isimanga uxwebhu lwantlandlolo olubhengeza unyulo lomhla we-Meyi 2021 olindelweyo lwasuswa kwiwebhusayithi ye-UNWTO. Iphakamisa umbuzo ukuba ngaba olo tshintsho lwaphula iinkqubo zangaphakathi kunye neendlela ezilungileyo xa kuziwa kwiinkqubo zonyulo lweearhente ze-UN ngokupheleleyo.
Ingakumbi kwesi sihloko sibaluleke kangako, kuya kulindeleka kwiarhente ye-UN ukwazisa amalungu ayo ngolu tshintsho lucetywayo. Ngokwenza njalo kuyacaca ukuba lilinge lokungavumeli amazwe angamalungu ukuba athethathethane ngaphakathi nakwamanye amazwe kwaye bavakalise uluvo lwabo kwibhunga elilawulayo kule veki.
Ngokuzama ukubonisa olu tshintsho umzuzu nje ngendlela efihliweyo, kuyacaca ukuba eyona njongo kaPololikashvili ibikukuthatha amalungu abalulekileyo ngokungalindelanga kwaye kuthintele nayiphi na ingxoxo ngesindululo sotshintsho.
Kwintlekele ekhoyo ngoku ngenxa ye-COVID-19, kuya kuba kokufanelekileyo ukubonelela abagqatswa abanokuba nexesha elingakumbi lokukhankasa kunexesha elincinci. Ukuhamba okwangoku kubonakala ngathi akukho mthethweni kakhulu. Kutheni le nto kungothusi? Emva komcimbi wonyulo ngo-2017 kwi-UNWTO General Assembly e-Chengdu China, i-UNWTO ivumile ukuba ichonge iqela eliza kuhlaziya iinkqubo zonyulo luka-Nobhala-Jikelele we-UNWTO. Inqaku yayikukubandakanyeka okusebenzayo kuwo onke amalungu kwinkqubo yonyulo.
UGqr. Walter Mzembi owayesakuba nguMphathiswa Wezokhenketho eZimbabwe wayekhuphisana noZurab Pololikashvili kunyulo lowama-2017 kwaye etyhola ubuqhetseba nokukhohlisa. Isizathu sokuba uMzembi angaqhubeki nesichaso sakhe ngokuchasene nesiqinisekiso sikaZurab kwi-UNWTO General Assembly uChengdu yayisithembiso sokuba uyakukhokela iqela elisebenzayo.
Ngokubanzi, iNdibano uMzembi wazama ukunyanzela ivoti eyimfihlo ekuqinisekiseni uZurab Pololikashvili. Kwakoyikwa ukuba ukuvota okunjalo kuya kuthintela isiqinisekiso sikaNobhala Jikelele. Phantse kwiminyaka emithathu kamva kwikota yakhe, uPololikashvili akenzanga nzame konke konke ukuseka iqela elisebenzayo kunye nokuxoxa ngesihloko. Mhlawumbi woyika ukuba ayizukuba ngumdla wakhe ukwenza inkqubo evulekileyo, engafihlisiyo nokhuphiswano kunyulo lukaNobhala-Jikelele we-UNWTO. Kuyabonakala ukuba uyancedwa ukuba anyulwe kwasekuqaleni, kwaye usenokuthembela ekutyibilikeni ekunyulweni kwikota yesibini ngenxa yokunqongophala okufanayo kwiinkqubo.
Iigloves zicinyiwe yayililungu leWorldTourismWire elipapashiweyo ndicacisa inkxalabo ephakanyiswe nguMzembi kweyoMsintsi yowama-2017.
NgoMvulo inqwelomoya yenqwelomoya iza kuzisa abasebenzi be-UNWTO, abameli, kunye namalungu ebhunga elilawulayo asuka eMadrid aya eTbilisi, eGeorgia kwintlanganiso ye-UNWTO yebhunga elilawulayo kule veki.
I-Tbilisi yidolophu yasekhaya kaNobhala-Jikelele we-UNWTO uPololikashvili.
Uya kuqinisekisa ukuba bonke abathunywa bokuvota baya kuba nexesha elimnandi. Ezinye iiarhente ze-UNWTO ngobulumko zigqibe kwelokuba ziququzelele iintlanganiso phantse, i-UNWTO ihambisa amagosa ezokhenketho eSpain, enye yeendawo eziphambili ze-COVID emhlabeni ukuya eGeorgia. Ukuhamba kude ekuhlaleni kungangumbandela wokwenyani. Ukusukela oko uPololikashvili eqala ukusebenza e2018 wayehlala ekhathalela amaLungu eBhunga elinoLawulo oluPhezulu
Oku kubalulekile kuba kuphela ngamalungu ebhunga elilawulayo avotayo. UPololikashvili ufuna ezi voti kunyulo lwakhe kwakhona.
Kuyamangalisa ukuba nje ukuba uPololikashvili abe nethuba lokuhamba ngexesha lobhubhane we-COVID-19, utyelele kuphela amaLungu eBhunga ukuxhasa kunye nokuxhasa iinzame zabo zokuvula kwakhona icandelo lezokhenketho. Kwangelo xesha, amanye amazwe angamalungu aziva ekhathazekile kukusilela kwempendulo kwi-UNWTO kunye no-Nobhala-Jikelele xa befuna inkxaso kunye nokuvunywa.
Ukuqeshwa okutsha kwizikhundla eziphezulu ze-UNWTO kunikwe abameli abavela kumalungu eBhunga apho uPololikashvili elindele ukuvota njengembuyekezo. Oku kunjalo ngakumbi xa oku kubandakanya amagosa aselula, ekulindeleke ukuba ahlale kwi-UNWTO.
Ingqwalasela yakhe ekusebenzeni namazwe ambalwa angamalungu yenze ukuba uNobhala-Jikelele angabonakali kumazwe amaninzi kunye nemibutho yamaqabane. UPololikashvili wenqabile izimemo ezininzi zokukhokela iminyhadala yezokhenketho kunye neeforum, apho uNobhala Jikelele we-UNWTO wangaphambili wayehlala ethetha. eTurboNews khange akwazi ukubuza umbuzo omnye.
Amagosa onxibelelwano e-UNWTO ahlala ethe cwaka kuzo zonke izicelo zosasazo.
Ubambiswano olomeleleyo i-UNWTO eyayinalo neBhunga lezoKhenketho lweHlabathi kunye nezoKhenketho lityhafile phantsi kwePololikashvili, kwaye akusekho zinzame zidibeneyo zokuzama ukubaluleka kwecandelo lezokhenketho phakathi kweenkokheli zehlabathi.
Ngokukodwa ngoku nge-COVID-19, amanyathelo anjalo ngewayebaluleke kakhulu kula maxesha anzima.
Rhoqo, abameli abavela kumazwe angamalungu kunye nabasebenzi be-UNWTO bavakalise inkxalabo yokuba baziva beneentloni xa besiva uPololikashvili ethetha esidlangalaleni malunga nophuhliso lokhenketho.
Ukuba i-UN ivumela ubuqhetseba bolonyulo ukuba benzeke kwenye yee-arhente ze-UN, iyakuphulukana nayo yonke into esemthethweni yokuphembelela idemokhrasi kunye nokhetho olunobulungisa kumazwe angamalungu.
Ukuvumela utshintsho olunje ngenkqubo kunokuba neziphumo eziyintlekele kulo lonke oomatshini beZizwe eziManyeneyo.
Iqela labantu abachaphazelekayo abangaziwa kufutshane ne-UNWTO babesasaza ulwazi kwaye banegalelo kolu lwazi luphakanyisiweyo kweli nqaku. Kuhleli ukuba kubonwe ukuba leliphi ilizwe elizakunikezela kwaye lixhase.
IRashiya neNamibia zihamba ngaphandle kwevisa
U-WHO ubhengeza isibheno esingxamisekileyo se-US $ 7.7 yezigidigidi ukubamba ...
Izithintelo zincitshisiwe e-Bangkok njengoko amanani e-COVID ewela kwi-30%
Imicimbi ye-FAA Isilumkiso esitsha se-Boeing 737 MAX